Tartankii Premier League oo gabo gabo ah iyo jamaahiirta Liverpool oo baryo taagan. Yeey baryeen? – Somali Sounds
Tartankii Premier League oo gabo gabo ah iyo jamaahiirta Liverpool oo baryo taagan. Yeey baryeen?
April 30, 2019 April 30, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa labadii tababare ee kooxdooda Liverpool kula soo dhawaaday ku guulaysiga koobka Premier league waxay ka doonayaan in ay asxaan u sameeyaan waxayna kala yihiin tababarayaasha kooxaha Leicester City ee Branden Rogers iyo Rafa Benitez oo hogaaminaya Newcastle United.
Labada nin ayaa kala hogaamiya Kooxaha Leicester City iyo Newcastle United waana macalimiintii hore ee Liverpool. Newcastle waxaa ay la ciyaareeysaa Liverpool maalinka Axada ah halka Leicester City ay wajaheeyso Kooxda Manchester City maalinka Isniinta ah ee todobaadka dambe hadaba Taageerayaasha ayaa doonaayo in Newcastle United ay sii deeysaa Liverpool halka Leicester City ay doonayaan inay dhibco ka soo helaan Garoonka Kooxda Man City.
SADAQ JOON OO KU DULSOCDA DHIMBILO DAB Ah.
SADAQ JOHN Waxa nasiib daro weyn ku ah in uu Cuqdad uu'u qabo Cali Xubey…
Kooxda Bayern Munich oo xeerineeysa inay la soo wareegto Jose Mourinho.
Kooxda Bayern Munich oo xeerineeysa inay la soo wareegto Jose Mourinho. Kooxda Bayern Munich ayaa ka fakareeyso inay u dhaqaaqda saxiixa macalin Jose Mourinho kaas oo shaqo la’aan ah tan iyo bishii December ee sanadkii tagay markaas oo uu ka tagay Man United. Bayern ayaa Kooxdeeda sanadkaan aad ay u liidatay waxaana ay Jose u […]
Manchester United ayaa si rasmi ah ugu magacaawday Ole Gunner Solskjaer macalinkeeda rasmiga ah kadib markii uu ka soo dhalaalay hoowshii Kumeel Gaarka aheed ee loo igmaday markuu shaqada ka badalay Jose Mourinho. Waxaa uu Ole Gunner Solskjaer kooxda ku soo biiray 18 December 2018 markaas oo shaqada laga ceeriye Jose Mourinho xilli kooxda ay […]